UNgqongqoshe uhlabeke umxhwele ngezinhlelo zeLoskop Water Treatment Plant eMtshezi – Sivubela intuthuko Newspaper
UNGQONGQOSHE woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNDaba zoMdabu KwaZulu-Natal uMnu Sipho Hlomuka ngesikhathi ehambele iLoskop Water Treatment Plant nobuholi baseNkosi Langalibalele Municipality
UNGQONGQOSHE woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu KwaZulu-Natala uMnu Sipho Hlomuka ukhuthaza abantu ngokunakekela amanzi ebakhuza ngokucekela amapayipi ngoba amanzi angumgogodla wempilo.
UMnu Hlomuka ubekhuluma emuva kokuba kucekelwe ingqalasizinda yamanzi kuMasipala iNkosi Langalibalele eWembezi eMtshezi okushiye imizi eminingi ingenawo amanzi kompompo. Ehambele eLoskop Water Treatment Plant ukushayele ihlombe ukuqhubeka kahle kohlelo lokuqiniswa kokuhanjiswa kwamanzi ahlanzekile emphakathini owakhele iNkosi Langalibalele Municipality.
ILoskop Water Treatment Plant iwuhlelo olusha okuhloswe ngalo ukuqinisekisa ukuhanjiswa kwamanzi kubantu abebedonsa kanzima ikakhulukazi emakhaya ekutholeni amanzi ahlanzekile ngokufakelwa izinjini ezintsha kushintshwe ezindala ebezisetshenziswa phambilibi.
Ngesikhathi uMnu Hlomuka ehambele kuleya ndawo wamuekele izikhalo eziningi ezimbandakanya ukuntshotshwa kwamakhebuli okwenza kube nzima ekugcineni lolu hlelo lwaseLoskop lusebenze kahle. Kuthiwe lesi sakhiwo sicekelwe kabili ngoSeptember lapho kwantshonthswa izintambo zikagesi ezimqoka. UMnu Hlomuka ube esenxusa amalungu omphakathi ekusebenzisaneni nabomthetho ukuze kutholwe abenzi bobubi bajeze ngokucekela phansi le ngqalasizinda. Ubuye wahlangana nawo wonke amakhansela alo mkhandlu kudingidwa izindlela ezintsha zokuhambisa intuthuko njengoba iNkosi Langalibalele beyingaphansi kweso lomlawuli kusukela ngo-2017. Leli phephandaba lithole ukuthi lo masipala uzithola ungaphansi kweso lomlawuli kulandela ukusetshenziswa budlabha kwezimali okwakumele zihambise intuthuko yabantu. Izikhundla eziphezulu zaba yimbangela ekusebenzeni kwemali kukhokhelwa abantu ababenamakhono angalingani nawezikhundla abaziqashelwe.UMnu Hlomuka uwuhlabe wawulawula ecela amakhansela ukuba mawasondelani nomnyango wakhe futhi abambisane nalowo ojutshwe umnyango ukuba umlawuli ukuze kube nozinzo kwezezilami futhi kuziwe nesisombululo esizohambisa ngokushesha intuthuko kubantu.